China Apron Conveyer fekitari uye bhizimisi | Sofiq
Inoshandiswa zvakanyanya mumishini, foundry, simbi, kemesitiri, zvishandiso, simba, kuchera, uye zvimwe zvikamu zveindasitiri, Apron Conveyer yemuenzaniso BLT mhando yechinangwa chikuru chakamira michini yekufambisa.
Inoshandiswa zvakanyanya mumishini, foundry, simbi, kemesitiri, zvishandiso, simba, kuchera, uye zvimwe zvikamu zveindasitiri, Apron Conveyer yemuenzaniso BLT mhando yechinangwa chikuru chakamira michini yekufambisa. Inoshandiswa mukutakura kweakakura akapararira zvinhu kana huremu hwechimwe-chidimbu kunyanya kuchinjika kune zvigadzirwa zvehombe vhoriyamu, kupinza, kurema-huremu, kupisa kwakanyanya uye ngura. Zvichakadaro, maitiro akadai sekutonhora, kuomesa, kupisa, kutsvaira uye kusarudzika zvinogona kuitwa panguva yekufambisa.
Apron Conveyer Yekumusoro Temepature Chinyorwa Chakagadzirwa MuChina
Plywood kesi, plywood tireyi, kana seyako yakakosha chinodiwa.
Muchina unogona kutsemurwa Izvi zvichatibatsira kudzikisa kutakura nzvimbo.
Isu ticharonga yakanyanya nyore pasuru uye nzira yekufambisa.
Nguva yekutora mazuva makumi matatu mushure mekugamuchira mari
Apuroni yekufambisa mhando yeplate inoendesa michina. Iyo mbishi yekugadzirisa zvinhu kana inoenderera yekugadzira maitiro ekushandisa.
Iyo yakareba yekuendesa inogona kusvika 40-80 metres.
Apron yekufambisa ndeye pasi yekufambisa, inogona kuve yakatwasuka, kutwasuka nzira yechinhu chinotakura. Iyo inoendesa michina yeplate cheni traction element, kwete chete simba hombe, rakanyanya kushanda, rakavimbika basa.
Iyo yakakodzera kuendesa block, chidimbu uye hupfu zvinhu.Iyo inogona zvakare kushandiswa kutakura yakapinza uye inopisa zvinhu.
2) Yakareba urefu inogona kusvika 80 metres.
3) Inogona kuwana yakatenderera kana inoteedzera conveyor.
Mukuenzanisa nemuenzaniso BLT, Apron Conveyer yemuenzaniso JYB yakakodzera kutakura rinorema kukanda.
Upamhi Of Apuroni (mm)
Hight Of muchimwiro (mm)
Inotenderwa Mutoro Wekutengesa (kg)
Max.Inclination Inotenderwa β
Mupanda Weketani (mm)
0.8-6 Inotsika Pasina Mirau
Horizontal Flaskless richigadzirisa Line, Flask, Semi-Automatic richigadzirisa Line, Kuumbwa chinu, Kuumbwa bhokisi, Flaskless richigadzirisa Machine,